विमलेन्द्र निधि नयाँ पुस्ताको सक्षम र योग्य नेता हुनुहुन्छ: मनमोहन भट्टराई spacekhabar
विमलेन्द्र निधि नयाँ पुस्ताको सक्षम र योग्य नेता हुनुहुन्छ: मनमोहन भट्टराई शेरबहादुर र रामचन्द्र उठे पनि नउठे पनि १४ औं महाधिवेशनमा पुस्तान्तरण हुन्छ।
स्पेसखबर काठमाडौं, २ असाेज
कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै छ । यसले फेरी महाधिवेशन सर्ने हो कि भन्ने आशंका हुदैछ नि?
क्रियाशील विवाद छिटो हल गरेर महाधिवेशनमा जानै पर्छ। अब पनि कुन बहानाले सार्न सकिएला र? समयमै भएन भने कांग्रेसमा अर्को संकट आउँछ। त्यसकारण तोकिएकै समयमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
बिगतका महाधिवेशनमा पनि क्रियाशली सदस्यतामा यो हदको विवाद हुन्थ्यो त? पहिलाका महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा यो हदको विवाद हुदैनथ्यो। तयारी पनि फरक ढंगबाट हुन्थ्यो। १७ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता अझै टुंगो लागेको छैन। यसो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
सभापतिको गृहजिल्लामा सुरक्षाघेरमा वडा अधिवेशन भयो। पुनः अधिवेशनको माग पनि उठेको छ। तपाई के भन्नुहुन्छ?
यसो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसरी अधिवेशन गर्दा कतिपय आउनै पर्ने साथीहरु छुटेका छन्। मेरो बुझाईमा डडेल्धुराको वडा अधिवेशनका बारेमा गम्भीर ढंगबाट सोच्नुपर्छ।
कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको कुरा उठेको छ। हिजोका दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा पुस्तान्तरणको कुरा उठाउने शेरबहादुर देउवा र रामचन्दै पौडेल पुनः सभापतिको दाबी गर्दै आउनु भएको छ। पुस्तान्तरणबारे तपाईको धारणा?
शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले हिजो पुस्तान्तरणको कुरा उठाउनु भएको हो भने १४ औं महाधिबेशनमा उहाँहरु चुप लागेर सभापतिको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु पर्छ। हुन त महाधिवेशनमा उठ्ने हरेकको अधिकारको कुरा हो। सभापतिका लागि विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइरालाले प्रष्ट रुपमा आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अरु पनि आकांक्षीहरु प्रतिस्पर्धामा आउनु होला। जे भए पनि कांग्रेस पुस्तान्तरणको बाटोमा अघि बढिसकेको छ। यसलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन।
निधिको दाबीलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
विमलेन्द्रजीको उम्मेद्वारीलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु। उहाँ नयाँ पुस्ताको सक्षम र योग्य नेता हो। महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन्।
त्यसकारण १४ औं महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ता अगाडि आएर कांग्रेस हाँक्नेछ। शेरबहादुर र रामचन्द्र उठे पनि नउठे पनि नयाँ नेतृत्व आउँछ नै, कसैले रोक्न सक्दैन।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २, २०७८, ११:२२:००
वर्षमा एकपटक नेपाल नआई मेरो मन मान्दैन: पर्वतारोही मेस्नर
सिटौलाको भण्डारबाट केही चोर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरुले फैलाएको हल्ला हो यो :कृष्णप्रसाद सिटौला
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देशलाई भड्खालोमा हालेः रामचन्द्र पौडेल
संकटको बेला झनै बलियो नेतृत्व चाहिन्छः चन्द्र ढकाल बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ